Zvishoma zvekutengesa zvinotarisirwa zveiyo iPhone 7 inoderedza huwandu hwechikamu odha | IPhone nhau
Vaongorori havawirirane pachinhu zvachose. Kubva kuChina kunouya makuhwa akasiyana siyana umo zvinonzi iyo kambani inogona kuve nechinangwa chekugadzira yakawanda iPhone 7 mamodheru mushanduro dzayo dzakasiyana gore risati rapera kupfuura panguva yakafanana gore rapfuura neiyo iPhone 6s uye 6s Plus.
Kune rimwe divi, mamwe makuhwa anobvawo kuChina achitaura kuti vagadziri vezvinhu vari kugamuchira mashoma zvigadzirwa zvekugadzira nekuda kwekutarisira kwakaderera kwekutengesa uko kambani yakaronga gore rino.
Ichokwadi kuti vamwe vaongorori vanoti gore rino haizorambe iri rekodhi yekambani yeCompertino-based uye sehuchapupu hweizvi isu tine nhamba dzakaburitswa nekambani muna Kubvumbi apfuura, kwataigona kuona kuti manhamba eApple akadonha sei zvichienzaniswa nemakore apfuura, kunyangwe aive akakwana zvakakwana kuti asaodza moyo kambani.
Uye zvakare, kubva kuChina zvakataurwa zvakare kuti chimwe chezvikonzero zvinogona kuita kuti kudiwa kudiki kwemuenzaniso uku kunogona kukonzerwa netarisiro yakaderera yevashandisi maererano nehunyanzvi mumateminari avo, chimwe chinhu chinopokana nekutarisa zvitsva zvavanofarira. mhando nyowani dze iPhone senge iyo mbiri kamera, yakawanda RAM, kubviswa kweiyo headphone jack kubatanidza...
Chinhu chega chinoita kunge chiri pachena ndechekuti gore rino chichava shanduko yekambani, gore iro Apple risingazodzoke kuzopa iwo anoyevedza ekutengesa manhamba ayo yaratidza kusvika nhasi. Pamusoro pezvo, chikamu chemhosva zvakare Samsung uye neruzhinji uye kubudirira kwakanyanya kweiyo Galaxy S7, modhi iyo pakutanga yaitaridzika kunge kopi yekabhoni yeS6 asi yakaratidza kuve kukanganisa kwakazara pachigadzirwa chayakapa kwekupedzisira. gore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Yakaderera iPhone 7 yekutarisira zvinotarisirwa zvinoderedza huwandu hwezvinhu zvekuodha
Blah blah blah kushaikwa kwezvinhu zvitsva uye bang iphone 6s ine gumi nemana yekuvandudza pamusoro pe iphone 14!
Blah blah blah Samsung uye mumacompany uye mumugwagwa ndinongoona vanhu vane maPhones
Blah blah blah inodonha kutengesa uye vachitengesa gazillion imwe, ikozvino ivo vanotengesa "chete" magazioni ...
Zvinoenderana nerunyerekupe rwunotenderera, zvinoita sekunge hutsva gore rino huri kuzochengetwa mudhirowa kuti iratidze gore rinouya kupemberera gore regumi
Huya, zvinoita sekunge gore rino richava gore rekuchinja. Ivo vanozowedzera mashoma mashoma shanduko kuratidza kuti ivo vari kukutengesera iwe yakagadziridzwa 6s, izvo zvandisingafunge kuti ivo vanotodaidza iyo iPhone 7.
Iyo mbiri kamera kana icho chingave chinhu chitsva asi zvine runyerekupe kuti chete "pro" vhezheni yechizvarwa chitsva ndiyo ichava nayo, saka chero anotenga iyo "base" modhi haazove nayo.
Iyo ine yakawanda RAM ndangariro, kunyangwe ichidikanwa, haisati iri yekuvandudza
Kubviswa kweheatherphone jack kubatanidza… Ndinovimba kuti hapana munhu achanditengesa sechinhu chitsva chinofanira kutenga adapta yekubatanidza mahedhifoni angu kune mheni uye zvinopesana, nekuti handifunge kuti Apple ichakupa iyo adapta. zvazvichaita kukupa iwe mamwe mahedhifoni ane mheni yekumhara uye unomhanya. Kana iwe uchida iwo mahedhifoni pane mamwe madhiraini kana kana iwe uchida kushandisa mamwe mahedhifoni pane iyo nyowani iPhone, iwe unoziva, kuti upfuure mubhokisi, muchitoro cheApple ivo vanozove nemaadapter maviri epamutemo pamutengo unonzwisisika weapapitera eApple.
Mukupedzisira vanogona kuunza zvimwe zvitsva asi zvese zvinoratidza kuti rinenge riri gore reshanduko
Ehezve, ndiri pachena kuti izvo zvavanotora chichava chigadzirwa chemhando yepamusoro uye kuti chinoshanda zvikuru
Pindura kuna Alrodgar